အသေးစားစျေးကွက် | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အသေးစားစျေးကွက်
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, နှင့်အတူချွတ်စတင်ရန်လိုအပ်သောသောသက်သေဖြစ်စဉ်ကိုလည်းမရှိ. အတော်များများကဖန်တီးမှုလူများတို့သည်ကြီးစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများရှိတယ်, ဒါပေမယ့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်နည်းသည်ထိရောက်မှုမရှိသလိုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ flops. ပထမနှင့်ဗွေဆော်, သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားသောဈေးကွက်ကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်. ယခုဤအဘယ်အရာကိုအတိအကျဆိုလိုတာ?
automatic ကြွယ်ဝမှု: အင်တာနက်ကိုဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကို
ဤဆောင်းပါးတွင်များအတွက်, ငါစာရေးဆရာများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်ခဲစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့စာအုပ်တွေထဲမှာရှာတွေ့နိုင်မယ့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုရွေးချယ်. ငါသည်ဤအကြောင်းအရာများအရေးပါမှုနှင့်အရေးပါမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုရှာဖွေ, နှင့်အနောက်တိုင်း, အထူးသဖြင့်, အရမ်းမြင့်. စာရေးဆရာများနှင့်ထောက်ခံသူများ (ဥပမာ,, Schroeder, 2004) ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင်နှစ်ဦးစလုံးထံမှ; သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေ, အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လူသိများ, လူနည်းစုပိုင်ဆိုင်စီးပွားရေး, အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ (အသေးစားနှင့်အလတ်စား-အရွယ်အစားလုပ်ငန်း), သို့မဟုတ် SMB (အသေးစားနှင့်အလတ်စား-size ကိုစီးပွားရေး), လုံးဝနီးပါးကသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြ.
ကုန်သွယ်ရေး Show ကိုပြသခဲ့သည် – သာမန်များအတွက်သိကောင်းစရာများ
ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲဘာမှပေမယ့်ပန်းခြံအတွင်းလမ်းလျှောက်နေကြသည်, အတွေ့အကြုံရှိပြသခဲ့သည်အဘို့အသင်မူကား, ဘယ်တော့မှပါတယ်လျှင်ပင် "အတွေ့အကြုံရှိ" တဦးတည်းကအကယ်စင်စစ်တစ်ဦးစိတ်ညစ်စရာတာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်. သို့သော်, တောင်တော်သင်ကုန်သွယ်မှုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြပုံပေါ်သကဲ့သို့ကြီးတွေသင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရောနှောသို့ပြသ. နောက်ဆုံးတော့, angst နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၏လအကြာသင်နောက်ဆုံးတွင်ကျဆင်း ယူ. တစ်ခုပြသခဲ့သည်အဖြစ်သင်ပထမဦးဆုံးစားသုံးသူကုန်သွယ်မှုပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် - စာရင်း၏နေ့ရောကျပွီ. သို့သော်တစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်း, အရာ wi ပြသ ...
ငါးလွယ်ကူခြေလှမ်းများအတွက် သာ. ကောင်း၏လိုင်းအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
Marketing ကို Comapny အင်ဖိုပြီးတော့အကြံပြုချက်
သင်ဆဲ In-အိမ်နှင့်သင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျထောကျပံ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းတဲ့ပရိုမိုးရှင်းကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Outsourcing ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်.
ဥပဒေထားပါလုပ်နည်း & သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာအလေ့အကျင့်များကိုစတင်ရောင်းချသို့အမိန့်
ပထမသုံးဆောင်းပါးများတစ်စီးရီးအတွက်မည်သို့ပင်ကိုယ်တော်၏တရား၏ကုမ္ပဏီများပြစ်မှုဆိုင်ရာအာရုံစိုက်, အရပ်ဖက်, ကော်ပိုရိတ်, မိသားစု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, စသည်တို့ကို. ကုမ္ပဏီများနှင့်ရင်ဆိုင်ရ Mid-size ကိုဆုံးသေးငယ်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်မဟာဗျူဟာနှင့်စည်းကမ်းချဉ်းကပ်၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်. ရည်ညွှန်းအပေါ်မှီခိုနေတဲ့နည်းဗျူဟာကိုလုပ်မထားဘူး! ထိုအဓိကအမှုဖွင့်ပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်သည်အထိစျေးကွက်အကြောင်းကိုအလေးအနက်ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေလမ်းသိပ်နောက်ကျဖြစ်ပါသည်.
The whole world has becomeasmall marketplace. Due to the advent of computerization and the Internet, people from different parts of the world have access to various lifestyles, customs, products and services of different locations. The USA markets have always been attractive for international shoppers. ဒါပေမဲ့, they face many problems when shipping their consignments to their locations.
သင်ကအရမ်းအသေးစားစဉ်းစားနဲ့ပျက်ကွက်ရန်သင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Dooming နေကြတယ်?
အများကြီးသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေသို့ပြေးကြောင်းတစ်ခုမှာပြဿနာရိုးရှင်းစွာသေးငယ်လွန်းစဉ်းစားနေသည်. ကျွန်မမကြာခဏစာဖတ်သူများမြေပြင်ကိုချွတ်ရတဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများကူညီပေးနေတောင်းငါ့ထံသို့ရေးသားခဲ့ကြ. ငါသည်လည်းမကြာခဏမြေပြင်သို့၎င်းတို့၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို run ကြသူရှေးရှေးထဲကနေနားမထောင်. သငျသညျသေးငယ်လွန်းထင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာငါးခုသော့ချက်ဒေသများရှိပါတယ် -- နှင့်ပျက်ကွက်ရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Doom.
သင့်ရဲ့ Advertising ကြော်ငြာကျွမ်းကျင်မှုပဟေဠိ
Advertising ကြော်ငြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါကြော်ငြာအောင်မြင်လိုလျှင်, ဒါဟာကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်. အစဉ်အလာကြော်ငြာနတ်ကတော်အလွန်စျေးကြီးဖြစ်လာကြောင့် Advertising ကြော်ငြာ TODAY ကမ်ဘာပျေါတှငျဆန်းသစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်လိုအပ်ပါတယ်.
ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို Motion Pictures ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည်ကင်မရာလုပ်ငန်းရှင်များရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရန်ခရီးသွားနိုင်ပါစေ
ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို Motion Pictures ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည်ကင်မရာလုပ်ငန်းရှင်များရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရန်ခရီးသွားနိုင်ပါစေ - မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ!
Internet and several other sophisticated technologies have provided new means of doing business, စျေးဝယ်, communicating and many other works. The whole world is now turning out to beasmall market place and the distance between nations is shrinking gradually. The concept of virtual address enables an individual,acompany oragroup of companies to createadistinct identity for themselves by availing facilities without being physically present there. As t
ထိရောက်သော Links များအဆောက်အအုံမဟာဗျူဟာ
သင်ဟာ The Millionaire စိတ်ရှိပါနဲ့?
ထိပ်တန်း5တစ်ဦးမူလစာမျက်နှာအခြေခံပြီးစီးပွားရေးရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
20 Have သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်စာဝက်ဘ်ဆိုက် ReasonsTo
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း – သင်သိပါရန်လိုအပ်အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်.
Autosurf ခုနှစ်တွင်အတူ Big ငွေရှာ5မိနစ်နေ့
Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ် 101: လူ့ဆက်ဆံရေး၏ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
မူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးကနေအလုပ် –4မူလစာမျက်နှာ မှစ. လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းများ Start ကိုအလုပ်အဖွဲ့
အွန်လိုင်းမှကုန်တင် loadboard သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဆွဲဆောင်မှုအရောင်းပေးစာ Create လုပ်ဖို့ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ